Jesosy: Ny fanjakan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Jesosy: Ny Fanjakan'Andriamanitra
Inona no zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainanao? Iees jesosy izany Io ve ny teboka ifantohananao, tebokao, linchpin, ny teboka fototry ny fiainanao? Jesosy no ivon'ny fiainako. Raha tsy misy azy dia tsy manana aina aho, ary raha tsy misy azy dia tsy misy miasa amin'izay lalana mahitsy. Saingy amin'i Jesosy, mahasambatra ahy ny miaina ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.
Taorian'ny porofo fa Jesosy dia ilay Mesia, Ilay mpitondra ny hafatr'Andriamanitra, Kristy, dia manamafy aminao aho: «Miara-miaina amin'i Jesosy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ianao, satria ao anatinao, eo afovoanay».
Nanontany an'i Jesosy ny Fariseo hoe rahoviana no ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izao no navaliny: "Ny fanjakan'Andriamanitra tsy tonga amin'ny fomba hahafantaran'ny olona azy amin'ny famantarana ivelany. Ary tsy hisy afaka hiteny hoe: Indreo, inty! Na: Eo io! Tsia, ny fanjakana Andriamanitra dia ao afovoanao, na: "Jereo, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao afovoanao" (Lio.
Raha vao nanomboka nitory ny fanjakan’Andriamanitra tamin’ny fahefana i Jesosy dia tonga teo ny Fariseo. Niampanga azy ho niteny ratsy an’Andriamanitra izy ireo na dia nilaza ny marina tamin’izy ireo aza. Nijoro ho vavolombelona tao amin’ny filazantsarany izy fa tonga ny fotoana ary efa tonga ny fanjakan’Andriamanitra (araka ny Marka 1,14-15). Nisy vehivavy Samaria tonga hantsaka rano teo amin’ny loharanon’i Jakoba. Jesosy dia nanomboka ny fifanakalozan-kevitra taminy: "Omeo Aho hosotroiko!" « Fa Jesosy namaly hoe: Raha fantatrareo ny amin’ny fanomezan’Andriamanitra, sy izay milaza aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia ho nangataka taminy ianao, ka ho nanome anao rano loharano, dia rano velona. Fa izay misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta intsony. Ny rano izay omeko azy dia ho loharano ao anatiny izay tsy mitsahatra mikoriana mandra-pahatongan’ny fiainana mandrakizay » (Jao 4,9-14 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Atolotr’i Jesosy anao koa ny fomba fiainany mba hikoriana tsy an-kijanona eo aminao sy ny mpiara-belona aminao, ankehitriny ary ho amin’ny fiainana mandrakizay amin’ny fitsanganana amin’ny maty. « Fa avy ny andro, eny, efa tonga sahady, izay hivavaka amin’Andriamanitra amin’ny maha-Ray ny olona, ​​dia olona feno ny Fanahy ka mahalala ny marina. Andriamanitra dia Fanahy, ary izay te hivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin’ny fanahy sy ny fahamarinana.” (Jaona 4,23-26 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Ahoana no ivavahanao an'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Hoy i Jesosy: "Izaho no voaloboka no voalobokao!" Raha mijanona ao amin'ny voalobohan'i Jesosy ianao dia hamoa ianao, hamoa bebe kokoa, eny be ny voankazo. Tokony hampiasa ny voankazo nomen’i Jesosy anao ianao, mba hampidiranao ny mpiara-monina aminao. Ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-po, hatsaram-po, tsy fivadihana, fahalemem-panahy ary fifehezan-tena, ny fomban'Andriamanitra, tsy vitan'ny Fanahy fotsiny fa fanehoana ny fitiavanao ny namanao. Ny loharanom-pitiavana, Jesosy, izay mikoriana tsy tapaka, dia tsy ho maina intsony fa kosa hikoriana amin'ny fiainana mandrakizay. Mihatra izany ankehitriny sy amin'ny ho avy, izay hita ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahafenoany.
Amin'ny alalanao, i Jesosy dia manambara ny tenany amin'ny vadinao, ny zanakao ary ny ray aman-dreninao, ny namanao sy ny mpiara-belona aminao, na dia samy hafa aza izy ireo. Tian’i Jesosy ny fitiavany izay miboiboika aminao, hamakivaky anao hatrany amin’ireo manaraka anao. Te hizara an'io fitiavana io amin'ny olon-tianao ianao, satria tianao indrindra toy ny tenanao.
Ianao sy izaho dia manana fanantenana velona satria ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty dia manome lova tsy mety lo: fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nifantoka tamin'io aho: momba an'i Jesosy ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.